टिकटकमा चर्चित हुन जब यी युवती बिच सडकमा नाच्न थालिन्, त्यसपछि के भयो? (भिडियो हेर्नुहोस्) - Nepali in Australia
September 28, 2021 autherLeaveaComment on टिकटकमा चर्चित हुन जब यी युवती बिच सडकमा नाच्न थालिन्, त्यसपछि के भयो? (भिडियो हेर्नुहोस्)
एक चर्चित भिडियो बनाउन को लागी, सोशल मिडिया अझ टिकटक चलाउनेहरु के सम्म गर्न सक्छन् आजकल भन्ने उदाहरण त नेपालमा बेला बेलामा देखिएकै छ । तर एक इन्स्टाग्रामरलाई भने यस्तो हरकत गरेका काण कारण समस्या परेको छ ।
भारत इन्दौरकी एक युवतीको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ जसमा उनी ट्राफिक सिग्नल मा बत्ती रातो भएपछि नाचिरहेकी थिइन् । नृत्य भिडियो रसोमा स्क्वायर मा रेकर्ड गरिएको थियो, जो इन्दौर, मध्य प्रदेश को व्यस्त सडकहरु मध्ये एक हो ।
श्रेया कालरा नाम गरेकी यो केटी डोजा क्याट नाम गरिएको शो मा पनि देखिएकी थिइन् । उनी अचानक जेब्रा क्रसिंग मा नाच्न थालिन् जब बत्ती रातो भयो । एक व्यक्ति जो उनको साथमा थियो गीत मा नृत्य गरेको भिडियो लिइरहेको थियो ।
श्रेया सिग्नल मा नाचिन् । बत्तीहरु हरियो नहुँदासम्म मानिसहरुलाई उनको भिडियो को माध्यम बाट मास्क लगाउन को लागी अपील गरेकी थिइन् ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
विश्वकै अग्लो ‘बुर्ज खलिफा’ भवनको टुप्पोमा पुगेर भिडियो बनाउने यि महिला को हुन् ? साहस देखेर विश्वभर चर्चा (भिडियो हेर्नुस्)